Realme GT bụ onye ọrụ gọọmentị na Snapdragon 888 na 65W ụgwọ ngwa ngwa | Gam akporosis
Onye Asia na-emepụta Realme ewepụtala otu n'ime ọkọlọtọ ya na-esote ya n'echiche nke ire ọtụtụ nde nkeji nke ngwaọrụ nwere ụbụrụ Qualcomm kachasị ọhụrụ. Companylọ ọrụ ahụ kpughere ọnụahịa Realme GT 5G awa ole na ole gara aga emere ka eme ya nile, ma obu na ngwa ya na egwuru-egwu ya.
Ezigbo GT 5G agafeela ụbọchị ole na ole gara aga site Geekbench egosiputa ihe omuma ya ugbua, obu ezie agaghị emejuputa 125W chaja, ọ ga-anọ n’etiti. Dlọ ọrụ Dongguan na-ekwe nkwa ịmalite nke mbụ na China wee gachaa ndị ọzọ nke ụwa n'otu oge, maka nke a, enwere nnukwu mmepụta nke ekwentị a.
1 Realme GT, ekwentị wuru iji rụọ
2 Batrị dị ịrịba ama
Realme GT, ekwentị wuru iji rụọ
Otu n'ime ihe ngosi bụ ihuenyo AMOLED nke 6,43-anụ ọhịa, mkpebi ahụ bụ Full HD + na ọnụego ume ahụ ruru 120 Hz, mgbe ihe nlele na-emetụta oscillates n'etiti 180-240 Hz. Ogwe ahụ na-anọ n'ihu dum, ịbụ 94,5%, na-ejedebe akụkụ ndị a na-atụgharị.
Ugwu Snapdragon 888 processor, Chip na-esonyere Adreno 660 GPU nke na-ekwe nkwa ịkwaga egwuregwu ọ bụla dị na Storelọ Ahịa Play. Ebe nchekwa RAM si na 8 gaa 12 GB, ebe nchekwa ahụ sitere na 128 ruo 256 GB, ha ekwupụtaghị na enwere oghere, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke nwere ike iwepụ.
Na azụ ọ na-egosi ngụkọta nke ese foto atọ, ihe mmetụta bụ isi bụ megapixels 64, nke abụọ bụ 8 megapixel wide angle, ebe nke ikpeazụ bụ 2 megapixel macro lens. Igwefoto selfie bu megapixels 16, zuru oke iji gosiputa ihe di nma na foto ma dekọọ vidiyo na Full HD.
Batrị dị ịrịba ama
Realme GT 5G ahọrọla ịwụnye batrị 4.500 mAh, ọ na-ekwe nkwa izu ezu iji tachie obi, ịbụ batrị dị mkpa maka ụdị a. Realme GT 5G, nwere ihuenyo nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sentimita 6,5, na-ekwe nkwa nchapụta nke ọma, na-ekwe nkwa nchapụta dị elu karịa nits 400 wee rute Gorilla Glass na-echebe ya.
A ga-akwụ ụgwọ ahụ ngwa ngwa, ọ bụ 65W ma na-agbanye site na 0 ruo 100% ga-ewe ihe dị ka nkeji 20, oge zuru ezu iji nwee ike ịme ihe mgbe ị na-eme ya. A tụfuo ibu 125W, onye nrụpụta họọrọ nnukwu batrị, o nwekwara ndị e boro ebubo.
Site na itinye mgbawa Snapdragon 888, Realme GT 5G Ọ na-abịa na modem 5G gụnyere dị ka ọkọlọtọ, agbakwunyere 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC na minijack maka ekweisi. Onye na-agụ mkpịsị aka na-aga n'ihu, na-ekwe nkwa ezigbo ọsọ ma na-arịọ maka mkpịsị aka ozugbo ọ malitere mgbe o si na igbe ahụ pụta.
Sistemụ nrụọrụ bụ gam akporo 11 Na mmelite niile, ọ na-abịa na ọnwa nke February emelitere, ebe ị na-ahụ na ọnwa ndị na-abịanụ ọ ga-emelite ụdị dị iche iche. Omenala oyi akwa bụ Realme UI 2.0, ihe niile juru na ya.
IKIRU 6.43-anụ ọhịa AMOLED nwere mkpebi zuru ezu HD + (2.400 x 1.080 pikselụ) / Ume ume: 120 Hz / Gorilla Glass Victus
Gbanwee CAMERA 64 MP f / 1.8 isi ihe mmetụta / 8 MP obosara-n'akuku sensọ / 2 MP macro sensor
N'ihu CAMERA 16 MP f / 2.5 mmetụta
OS A gam akporo 11 ya na Realme UI 2.0
UMUAKA 4.500 mAh na 65W ngwa ngwa
Njikọ 5G / WiFi 6 / Bluetooth 5.2 / GPS / NFC / USB-C / Dual SIM / Minijack
NDỊ ọzọ Mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo / sterio ọkà okwu
Mbibi na ibu ibu 158.5 x 73.3 x 8.4 mm / 186 gram
El Ezigbo GT 5G Ọ na-abịa na agba atọ dị: isi awọ, acha anụnụ anụnụ na edo edo, enwere ike ịzụta ya site na ndoputa site na weebụsaịtị onye nrụpụta. 5 + 8 GB Realme GT 128G na-efu ihe ruru yuan 2.899 (euro 370 iji gbanwee) na ụdị nke 12 + 256 GB buru ibu na-abawanye na ụgwọ nke 3.399 yuan (435 euro)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Realme GT bụ ọrụ na Snapdragon 888 na 65W ụgwọ ngwa ngwa
Twitter na-enyocha ọrụ iji "mezie" tweets